Ch 6 Matthew – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Matio / Ch 6 Matthew
6:1 "Tandremo tsara, fandrao manao ny rariny eo anatrehan'ny olona, mba hahitany izany;; raha tsy izany dia tsy mahazo valim-pitia amin'ny Rainareo, Izay any an-danitra.
6:2 Noho izany, rehefa manome fiantrana, aza misafidy ny mitsoka trompetra eo anoloanareo, tahaka ny fanaon'ny mpihatsaravelatsihy eo amin'ny synagoga sy ao an-tanàna, mba homem-boninahitra ny olona. Amen Lazaiko aminareo, fa efa azony ny valim-pitiany.
6:3 Fa rehefa manome fiantrana, aoka tsy ho fantatry ny tananao havia izay tananao ankavanana no manao,
6:4 ka dia ny fiantrana mety hatao ao amin'ny mangingina, ary ny Ray, izay mahita ao amin'ny mangingina, no hamaly anao.
6:5 Ary rehefa mivavaka, tsy tokony ho tahaka ny mpihatsaravelatsihy, izay fitiavana mitsangana ao amin'ny synagoga sy teo am-joron-dalana mba hivavaka, mba ho hitan'ny olona. Amen Lazaiko aminareo, fa efa azony ny valim-pitiany.
6:6 fa ianareo, rehefa mivavaka, miditra ao amin'ny trano, ka rehefa voarindrinao ny varavarana, dia mivavaha amin'ny Rainao ao amin'ny mangingina, ary ny Ray, izay mahita ao amin'ny mangingina, no hamaly anao.
6:7 Ary rehefa mivavaka, Tsy mifidy teny maro, tahaka ny mpanompo sampy aza. Fa mihevitra fa noho ny mihoatra ny teny mba ho nankatò.
6:8 Noho izany, aza misafidy ny hanahaka azy ireo. Fa ny Rainareo mahalala izay mety ho zavatra ilaina ny, na dia eo anatrehanao mangataka aminy.
6:9 Noho izany, dia mivavaka toy izany: Rainay, Izay any an-danitra: Enga anie ny anaranao ka hatao foana masina.
6:10 Enga anie ny fanjakanao tonga. Enga anie ny sitraponao no hatao, tahaka ny any an-danitra, toy izany koa eto an-tany.
6:11 Omeo anay anio izay mahavelona ny mofo.
6:12 Ary mamelà ny helokay, tahaka ny namelanay izay meloka taminay koa.
6:13 Ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy. Fa hanafaka antsika amin'ny ratsy. Amen.
6:14 Fa raha mamela ny olona ny fahotany, ny any an-danitra koa dia hamela anao ny fandikan-dalàna.
6:15 Fa raha tsy mamela ny olona, ny Rainareo hamela ny fahotanareo.
6:16 Ary raha mifady hanina, aza misafidy ny ho maloka endrika, tahaka ny mpihatsaravelatsihy. Fa manova ny tavany, ka dia ny fifadian-kanina dia mety ho toa ny olona. Amen Lazaiko aminareo, fa efa nandray ny valim-pitiany.
6:17 Fa ny aminareo, raha mifady hanina, dia hosory ny lohanao, ary sasao ny tavanao,
6:18 ka dia ny mifady hanina dia tsy ho toa ny olona, fa ny Ray, Izay ao amin'ny mangingina. Ary ny Ray, izay mahita ao amin'ny mangingina, no hamaly anao.
6:19 Aza misafidy ny hitahiry harena ho anareo eto an-tany: izay misy harafesina sy kalalao manimba, ary misy mpangalatra mamaky trano sy mangalatra.
6:20 Fa tsy, Manangòna ​​harena ho anareo any an-danitra: izay tsy misy harafesina na kalalao manimba, ary tsy misy mpangalatra mamaky trano sy mangalatra.
6:21 Fa izay itoeran'ny harenareo, any koa ny fonao.
6:22 Ny jiron'ny vatanao no masonao. Raha ny masonao no mahasoa, ny vatanao manontolo no ho feno fahazavana.
6:23 Fa raha ny masonao efa simba, ny vatanao manontolo no ho maizina. Koa raha ny mazava izay ao anatinao dia maizina, akory ny halehiben 'izany haizina no ho!
6:24 Tsy misy olona mahay manompo tompo roa. Fa na dia manana fankahalana ny iray, ary tia ny hafa, na dia foana ny iray, ary tsinontsinona ny hafa. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy ny harena.
6:25 Ary noho izany dia lazaiko aminareo, aza manahy ny fiainanao, , dia izay no hihinana, na ny amin'ny tenanareo, , dia izay hotafinareo. Fa ny aina mihoatra noho ny hanina, ary ny tena noho ny fitafiana?
6:26 Diniho ny voro-manidina, Ahoana no tsy mba mamafy, na mijinja, na manangona an-tsompitra ireny, nefa ny any an-danitra manome sakafo azy ny. Moa tsy sarobidy lavitra noho izy ireo?
6:27 Ary iza moa ao aminareo, ny mieritreritra, no mahay manampy iray hakiho ny tsanganany?
6:28 Ary ny fitafiana, nahoana no manahy? Hevero ny fanirin'ny voninkazo any an-tsaha, fomba mitombo; dia tsy mba hisy asa, na Miahy.
6:29 Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe, fa tsy na dia Solomona, amin'ny voninahiny rehetra, nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny.
6:30 Koa raha izany no fitafiana ny ahitra any an-tsaha, izay any ihany anio, ka hatsipy any anaty lafaoro rahampitso, tsy mainka no hikarakara anao, Ry kely finoana?
6:31 Noho izany, dia aza misafidy ny ho manahy, nanao hoe:: 'Inona no hohaninay, ary inona no hosotroinay, ary inona no hotafinay?'
6:32 Fa ny jentilisa mitady izany rehetra izany. Nefa ny Rainareo mahalala fa tokony ho anareo izany rehetra izany.
6:33 Noho izany, katsaho aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny rariny, ireo zavatra rehetra ireo dia hanampy ho anareo koa.
6:34 Noho izany, dia aza manahy ny amin'ny ampitso; fa ny andro ho avy dia hanahy ny azy. Ampy ho an'ny andro ny ratsy dia. "